Degso ComboFix 17.10.14.1 loogu talagalay Windows
Madal: Windows Nooca: 17.10.14.1 Luqadda: English
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (5.40 MB)
ComboFix, waad ku nadiifin kartaa fayrasyada marka barnaamijkaaga antivirus uusan shaqeynin ComboFix waa barnaamij bilaash ah oo lagaa qaadayo viruska oo aad isticmaali karto hadii kombiyuutarkaaga ay soo weeraraan malware sida virus, trojans, rootkits, adware, spyware, malware iyo software-kaaga antivirus ma daboolayo baahiyahaaga si aad uga saarto barnaamijyadan xun. Combofix sidoo kale waxay ka saari kartaa fayrasyada xarkaha badan ee khalkhal galiya shaqada kombiyuutarkaaga, sida amvo.exe. ComboFix waa barnaamij softiweer ah oo loo sameeyay inuu ka codsado kombiyuutar aad u horumarsan iyo farsamo yaqaanno.
Barnaamijku wuxuu marin u heli karaa qayb kasta oo kambuyuutarkaaga ah wuxuuna si qoto dheer u baari karaa nidaamkaaga hab uusan barnaamijka antivirus-ka uusan ku sameyn karin.Sababtaas awgeed, waxaa lagugula talinayaa inaad joojiso softiweerkaaga fayraska ah oo aadan wax barnaamijyo ah ku wadin asalka inta aad isticmaaleysid barnaamijka. Intaa waxaa sii dheer, softiweerku wuxuu si otomaatig ah dib ugu bilaabayaa kombiyuutarkaaga ka dib iskaanka, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad kaydiso macaamilladaada intaad ku guda jirto ComboFix. ComboFix wuxuu leeyahay aaladda nadiifinta fayraska USB iyo sidoo kale inuu awoodo inuu nadiifiyo khayaanada faragelinta ku haysa qalliinkaaga kombuyuutarka isla markaana wax ka beddelaya hab-raaca biraawsarkaaga.
ComboFix, waxaad sidoo kale ku soo ceshan kartaa ulahaaga USB-ga ee uu ka dhigay mid aan la isticmaali karin fayraska Autorun. Sidan oo kale, flash drives iyo diskiga banaanka ayaa dib loogu soo celin karaa xaaladoodii hore Combofix wuxuu nadiifin karaa amvo viruska wax ka badalaya qaab dhismeedka faylkaaga. Amvo.Combofix, oo ah mid kamid ah softiweerrada yar ee aad u adeegsan karto ka saarista virus-ka exe, wuxuu si fudud u heli karaa fayraska amvo.exe wuxuuna siiyaa xalka amvo saarista asalka adoo si joogto ah u tirtiraya ComboFix, kuma talineyno inaad u isticmaasho ComboFix sidii software kaligiis iska caabin ah; Sababtoo ah softiweerku waa aalad fayraska laga qaado oo la isticmaali karo oo keliya markii loo baahdo.
Qalabkan oo aan siinaynin ilaalinta waqtiga dhabta ah kombiyuutarkaaga kama hor istaagayo in fayrasyada ay galaan kumbuyuutarkaaga, waxay kaliya ka caawinayaan in laga saaro fayrasyada ku soo dhex dhuuntay kombuyuutarkaaga oo aadan la macaamili karin. Ka dib markii ComboFix uu sameeyo hawlgallada baaritaanka fayraska iyo howlaha nadiifinta, waxay soo sheegaysaa in la ogaaday oo la nadiifiyey fayrasyada faylka qoraalka.Combofix waxaa loo maleyn karaa inuu yahay xirmada gargaarka degdegga ah haddii aadan natiijooyin ka helin hababka ka saarista fayraska caadiga ah sida antivirus. Ujeedada ugu weyn ee softiweerku waa in lagu ogaado fayrasyada aan lagu saari karin qaab caadi ah iyo in looga takhaluso fayrasyadan la soo helay iyadoo loo marayo qaabab kale.
Sidan ayaad ku soo celin kartaa kombiyuutarkaaga oo ay dhibaatooyin ka heystaan ​​fayraska howlgalkisa, howlihiisii ​​caadiga ahaa adigoo gacan ka helaya Combofix waadna sii wadi kartaa inaad kombiyuutarkaaga u isticmaasho dhibaato laaan. Markii si taxaddar leh loo isticmaalo softiweerka, wuxuu sababi karaa nidaamkaaga inuu burburo.Si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan adeegsiga ComboFix, waxaad ka hubin kartaa waxayagu yahay ComboFix, Sida loo Isticmaalo.Kahor intaadan codsanin barnaamijka Combofix ee ka-saarista fayraska, waa inaad ka hubisaa barnaamijyada kale ee amniga boggeena; Si kastaba ha noqotee, marka barnaamijyadani aysan daboolayn baahiyahaaga, waxaan kugula talineynaa inaad la tashato ComboFix.
Cabirka Faylka: 5.40 MB
Wararkii Ugu Dambeeyay: 03-04-2021